Papouasie-Nouvelle-Guinée - Fitantanana ny jono | Reef Resilience
Papouasie-Nouvelle-Guinée - Fitantanana ny jono
Ny tombontsoa iombonana amin'ny fiarovana ny fanala mihinana trondro dia mitarika amin'ny fitantanana ny fiaraha-miasa
Ny vatoharan-dranon'ny Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) dia anisan'ny karazam-biby maro samihafa manerana izao tontolo izao ary loharanon-tsakafo sakafo sy fidiram-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina. Ny 40,000 km2 Ny haran-dranomasina dia manamboatra loharano be dia be izay ampiasaina amin'ny ankapobeny fotsiny amin'ireo mpanjono madinidinika sy fisaka. Eo amin'ny sehatra nasionaly, ny fiompiana dia heverina ho ambany lavitra noho ny fahazoan-dàlana maharitra. Na dia eo aza ny fahasalamana ankapobeny amin'ny fisamborana PNG, ny fitrandrahana an-tserasera dia voamarika, indrindra amin'ny fisian'ny mpanjono manana fidiram-bola amin'ny tsena. Ny fitrandrahana tsy fahampian-tsakafo dia tena malemy loatra na dia ny faneriterena fanjono ihany aza, izay mety hisy fiantraikany lalina eo amin'ny mponina ao anatin'ny fotoana fohy mandritra ny fotoana fohy ary hampihenana ny vokatra fanondrotana.
Haran-dranomasina mafy orina miaraka amin'i Anthias sy Coral Grouper ao amin'ny toeram-pitrandrahana Knob an'i Killibob ao amin'ny faritr'i Kimbe Bay any Papua New Guinea. Ny Coral Triangle dia misy 75 isan-jaton'ny karazan-dranomasina fantatra, fialofana 40 isan-jaton'ny karazan-trondro amoron-dranomasina ary manome olona 126 tapitrisa. Sary © Jeff Yonover
Tahaka ny any amin'ny firenena tropika hafa, ny fitantanana ny fanjonoana any Papouasie-Nouvelle-Guinée dia mitaky fomba fijery mifototra amin'ny sehatra satria ny faritra madinika amin'ny sehatry ny seranan-tsambo (CMT) dia mamaritra ny haavon'ny sehatry ny fitantanana. Na dia izany aza dia tsy fantatra ny endriky ny larva avy amin'ny fanangonam-bozaka trondro any amin'ny faritra CMT ao amin'ny faritra, ary noho izany dia tsy mazava ny fomba ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena manantena ny fitantanana ny fitantanana mba hamenoana ny jono any amin'ny CMT. Noho izany dia zava-dehibe ny fampahalalana momba ny fiparitahan'ny larval: raha manaparitaka marobe amin'ny faritry ny tany ny larva, dia afaka manome lozam-pifaneraserana amin'ny fitantanana ny fiarahamonina eo anelanelan'ny fiarahamonina mifanila.
Ireo dingana nalaina
Mba hahatakarana bebe kokoa ny dinidinika momba ny trondro trondro, ny fikambanana aostralianina fikarohana momba ny natiora (TNC) dia nanao fanadihadiana ara-pananahana mba handrefesana ny fikajiana larval avy amin'ny fiangonan'ny trondro iray (FSA) amin'ny karazana katsaka (squaredail)Plectropomus areolatus) tao Manus, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ao amin'ny 2004, mba hamenoana ny tahirin'ny trondro ao an-toerana, ireo mpanjono ao amin'ny faritra iray ao amin'ny CMT dia nametraka faritra voaaro (MPA) miaro ny tontolo iainana (MPA) miaro ny 13% amin'ny toerana fanjonoana, anisan'izany ny FSA. Ireo mpikaroka sy ireo mpanarato teo an-toerana dia nametraka io FSA io nandritra ny herinandro 2 tamin'ny volana 2010 ary nanangona santionany avy amin'ny karazan-tsakafo, avy any ivelany, marika, 416 olon-dehibe mpikaroka, izay nampiseho ny 43% an'ny mponina FSA.
Mpahay siansa an-dranomasina, Alison Green manara-maso ny haran-dranomasina mandritra ny fanombanana haingana ny tontolo iainana (REA) any amin'ny faritr'i Manus, Ranomasimbe Avaratra, Papua New Guinea. Ny vatohara ao Papua New Guinea (PNG) dia iray amin'ireo karazan-karazany maro samihafa eto an-tany ary loharanon-tsakafo sy fidiram-bola lehibe ho an'ny vondron'olona. Sary © Louise Goggin
Nandritra ny 6 herinandro (novambra-Desambra 2010) dia novidina tao amin'ny faritra CMT ary faritra efatra hafa manodidina ny CMT ka hatramin'ny 782 km avy ao amin'ny FSA samihafa ny haran-javamaniry tanora 66 avy amin'ny vatohara 33. Ny fanadihadiana dia namantatra ireo zazalahy 76 avy amin'ny vatohara 25 izay ny taranaky ny olon-dehibe dia nalaza tao amin'ny FSA.
Ireo mpikaroka dia nitombina ny fomba nanampian'ireo loko manaparitaka avy ao amin'ny FSA corps (FSA) manampy amin'ny fandraisana mpiasa any amin'ny faritra manodidina CMT ary faritra efatra ao akaikin'ny CMT. Nahita izy ireo fa ny 17-25% ny famerenana amin'ny sehatra CMT izay ahitana ny FSA samihafa dia tonga avy amin'io FSA io ihany ary tao anatin'ireo faritra efatra nifanakaiky ny CMT, ny 6-17% ny fandraisana mpiasa dia avy amin'ny FSA samihafa. Farany, ny modelim-pifanarahana mifototra amin'ireo tahirin-kevitra ireo dia maminavina fa 50% ny larva dia hipetraka ao 13 km ary 95% ao anatin'ny 33 km an'ny FSA.
Ny toerana sy ny habetsaky ny zazalahy sy ny zazakely voafantina: ny rafitra ara-kolotsaina momba ny haran-jazakely (A) ary ny (B) tanora andraikitra amin'ny ray aman-dreny. Ny Green (A) sy ny jiro (B) dia mihalalina ny isan'ireo zazakely. Ny olon-dehibe dia nalaina avy tamin'ny fanangonam-bolo tokana (lakozia mena), ary ny zazakely dia voaangona avy amin'ny vatohara 66 (zotra maitso ao A). Ny andalana miloko miloko dia mampiseho ireo sisin-tany mahazaka am-bavahadin'ny vondrom-piarahamonina dimy, miaraka amin'ny anaran'ny vondrona tsirairay amin'ny fotsy (A). Tany mainty ny vatohara, mena ny vatohara, ary ny rano dia manga (Almany et al. 2013).
Manao ahoana ny fahombiazany?
Ny vokatra farany sy ny soso-kevitr'ity fianarana ity dia natolotra tamin'ny volana novambra 2011 ho an'ireo fiarahamonina dimy izay nandray anjara tamin'ny fikarohana sy ny Mbuke, ny vondrom-piarahamonina lehibe indrindra amin'ireo nosy amoron-dranomasina atsimo amin'ny faritra fianarana. Ireo fepetra telo fototra avy amin'ity asa ity dia:
Ny faritra madinika, voaaro izay miaro ny FSA dia afaka manampy amin'ny fananganana sy hanohanana ny haran-dranomasina fambolena iray satria maro ireo larva dia mijanona akaikin'ny FSA.
Ny fisamborana coralgrouper dia maneho ny tahiry lehibe iray izay ho tsara kokoa miaraka amin'ny ankamaroany satria ny lova sy ny trondro sasany dia mandeha amin'ny sisin'ny CMT.
Ny valin'ny fikarohana momba ny haran-dranomasina dia mitovy amin'ny vokatry ny fikarohana hafa momba ny karazan-jono sy tsy fisian'ny fisaka, izay manoro hevitra fa ny lavanila sasany dia lavitra lavitra ny ray aman-dreniny.
Ireo vokatra ireo dia maneho fa ny fitantanana eo amin'ny fiarahamonina dia mety hanome tombontsoa eo an-toerana ho an'ny karazam-biby sasany, ary angamba ho an'ny karazam-borona maro samihafa.
Tamin'ny fotoana fianarana dia tsy nisy rafitra ara-dalàna natao hanohanana ny fitantanana iombonana. Nanao fanapahan-kevitra mahaleo tena momba ny fisarihana ao anatin'ny faritra CMT ireo vondrom-piarahamonina. Na dia izany aza dia nisy mpikambana maro avy amin'ny vondrom-piarahamonina avy hatrany nahita ny lanjan'ny fitantanana ny orinasam-pambolena miaraka amin'ny vondron'olona ifotony taorian'ny famoahana ny valin'ny fanadihadiana. Ireo vondrom-piarahamonina manohana ny fitantanana iombonana, izay ahitana faritra manan-tanjaka Titan, anisan'izany ireo faritra dimy CMT izay nandray anjara tamin'ny fandalinana coralgrouper, dia nandefa mpitarika 70 ho amin'ny fivoriana tamin'ny volana jona 2013 mba hanangana ny tambajotra Manus Endras Asi Resource Development Network.
Ireo faritra valo ao amin'ny tambajotra valo dia ahitana olona mihoatra ny 10,000 miparitaka amin'ny ampahatelon'ny faritanin'i Manus (~ 73,000 km2 amin'ny ranomasina). Ny tambajotra dia napetraka manodidina ny sisintany misy eo amin'ny sehatra sosialy, miaraka amin'ny mpikambana rehetra mizara fiteny iraisana (Titan), ny finoana iombonana (Wind Nation), ary ny kolontsaina an-dranomasina. Ny paikady sasantsasany ampiasain'ny tambazotra ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny iraka ataony dia ny: manohana sy manohana fivoarana ara-drariny sy maharitra mba hanatsara ny fivelomana; fitehirizana lova ara-kolontsaina; fananganana sehatra fianarana mba hizarana ny traikefa teo anivon'ireo mpikambana ao amin'ny tambajotra mba hananganana fahaiza-manao eo an-toerana manatsara ny fiaraha-monina amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny tetikasam-piarahamonina; manohana ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny mpahay siansa izay mandray tombontsoa amin'ny fiarahamonina ary mametraka tamba-jotra misy faritra voaaro sy voaaro.
Sambo fanjonoana nosy sy ankizy any amin'ny faritr'i Manus, Ranomasin'i Bismarck Avaratra, Papua New Guinea. Sary © Louise Goggin
Hatramin'ny nanombohany tamin'ny volana jona 2013, ny tambajotra dia namorona ary nanasonia sata ofisialy napetraka ho raharaham-barotra voasoratra, niforona ary nanaiky ny drafitra stratejika, ary nametraka fifandraisana ara-dalàna amin'ny National Fishing Manan-tany (NFA) an'ny National Papua New Guinea mba handrindra ny fisarihana fitantanana fitantanana. Ny vokatra vao haingana tamin'ity rohy ity miaraka amin'ny NFA dia antoka iray avy amin'ny NFA mba hanomezana fitaovana fanangonana trondro rano (FADs) ho an'ny fiarahamonina tsirairay ao anaty tamba-jotra mba hampihenana ny fanerena fanjono eny amin'ny vatohara.
Tamin'ny fihaonan'ny tambajotra 2014 tamin'ny volana septambra, ny Filankevitry ny Tribak'ny Tribonaly, izay nanao ny andraikitry ny faritra misy azy, dia nankasitraka ny fametrahana rafitra feno rafitra sy faritra voaaro manerana ny faritra manontolo eo ambanin'ny fahefan'ny tambajotra. Ireo tanjona roa lehibe indrindra amin'ity rafi-piaraha-monina sy voaaro ity dia ny fiantohana ny faharetan'ny harena an-dranomasina sy ny fiarovana ny toerana lovan'ny kolontsaina. Ny dingana manaraka dia ahitana ny atrikasa famolavolana drafitrasa hampidirana ireo laharam-pahamehana eo amin'ny fiarahamonina sy ireo tanjona momba ny fiarovana, ny fahalalana eo an-toerana, sy ny angona siantifika ao amin'ny drafitra fitantanana ara-tsosialy ho an'ny faritra.
Lesona noraisina sy fanolorana
Ny fiaraha-mientana eo amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fitantanana ny jono dia mitondra tombony ho an'ny mponina sy ny mponina.
Ny fiaraha-mientan'ny vondrom-piarahamonina iray dia hisy fiantraikany amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy, ary ny fiaraha-miasa eo anivon'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fitantanana ny jono dia mety hanatsara ny fisian'ny fihazana maharitra sy ny faharetan'ny trondro meta.
Ny tanjaky ny fifandraisana eo amin'ny haran-dranomasina dia hihena raha mihamitombo ny elanelana eo aminy, ary mahazatra ny trondro amin'ny haran-dranomasina.
Ny famolavolana lozam-pandrefesana lavalava sy ny fifandraisany amin'ny fandraisana mpiasa dia mety hanome soso-kevitra mahavariana ho an'ny fitantanana fiaraha-miasa.
Ny fanapahan-kevitry ny fitantanan-java-manidina momba ny halehibe sy ny fikajiana ny faritra voaaro amin'ny ranomasina dia afaka manome tombontsoa amin'ny karazam-biby isan-karazany.
Famintinana ny vola
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFoiben'ny fikarohana momba ny harena an-kibon'ny tany
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy David sy Lucile Packard Foundation
Ny Rodney Johnson / Katherine Ordway Conservancy Nature Conservancy
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTahiry Faha-trondro sy Wildlife
Foiben'ny fikarohana momba ny harena an-kibon'ny tany
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Nature Conservancy
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoJames Cook University
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKing Abdullah University ho an'ny Siansa sy ny Teknolojia
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy University of Hawaii ao Hilo
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWoods Hole Oceanographic Institution
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLahatsary: ​​Disadisa Larval sy ny fiantraikany amin'ny fitantanana ny jono
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTombontsoa eo an-toerana amin'ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina: fampiasana faritra kely karakarain'ny fanamboarana sy fikolokoloana ny jono amoron-tsirakamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fanaparitahana ny olitra Grouper dia manosika ny fizarana harena eo an-toerana ao amin'ny zaridainan'ny vatoharamanokatra fisie PDF
Webinar ho avy - Teknika famerenana amin'ny laoniny ho an'ny vato harana tsy misampana: lesona avy amin'ny eran'izao tontolo izao